Outlook Express Tirtir Qalabka. Outlook Express Soo Celinta Emailka la tirtiray
DataNumen Outlook Express Undelete waa ugu fiican qalab inuu ka soo kabsado emails tirtiray ee Outlook Express. Waxay isticmaashaa teknoolojiyad casri ah si ay u baarto faylasha DBX iyo tirtirto inta emaylladaada ah intii suurtagal ah.
Fadlan isticmaal DataNumen Outlook Express Repair si aad uga soo ceshato emayllada ka jira MUSUQ Outlook Express ku soo dir fayl.
Fadlan isticmaal DataNumen Outlook Repair si aad uga soo ceshato emayl iyo walxo kale faylasha CORRUPT Outlook PST.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,510 cod)
maxaad DataNumen Outlook Express Undelete?
Kaliya qoraal ah si aan kuu ogeysiiyo in barnaamijka kor ku xusan uu si aad u wanaagsan u shaqeeyay waxaanan si guul leh ku soo kabtay almost 3000 oo emayl oo aan si kadis ah u qabtay
Kaliya qoraal ah si aan kuu ogeysiiyo in barnaamijka kor ku xusan uu si aad u wanaagsan u shaqeeyay waxaanan si guul leh ku soo kabtay almost 3000 e-mayl oo aan si kadis ah si rasmi ah u tirtiray. Kama waaban doono inaan kula taliyo asxaabta iyo asxaabta.
SA Eex Warshadaha Xaddidan
Waxaan isku dayay seddex shey oo kale ka hor inta aanan helin Horumar Outlook Express Soo kabashada. Laba ka mid ah barnaamijyadu waxay heleen dhammaan farriimaha, hase yeeshe, farriimaha ayaa lahaa
Waxaan isku dayay seddex shey oo kale ka hor inta aanan helin Horumar Outlook Express Soo kabashada. Laba ka mid ah barnaamijyada ayaa laga helay dhammaan farriimaha, hase yeeshe, farriimaha wax xog ah kuma lahan meydadka. Ta saddexaad xitaa may helin dhammaan e-maylkii jiray. Isku daygii ugu horreeyay ee Advance Outlook Express Soo kabashada ayaa muujisay dhammaan faylasha tijaabada. Waxaan iibsaday badeecada fariin kasta oo aan galana isla markiiba waa la soo celin karaa. Kani waa badeecad cajiib ah oo runtii waa u qalantaa qiimaha.
Guy My Computer
By habka, wax soo saarka waa heer sare. Waxaan uga mahadcelinayaa raggii soo saaray qalab waxtar leh.
Runtii way xaliyeen naftayda.
Waxaan dhibaato ku qabay faylka banaanka ee 1.5GB, aad baan u kacsanahay laakiin AODR ayaa xaliyay arimahayga waxayna iga caawisay inaan ka soo kabsado dhammaan xogtayda, Thanks Wax badan
Waxaan dhibaato ku qabay faylka banaanka ee 1.5GB, aad baan u kacsanahay laakiin AODR ayaa xaliyay arimahayga waxayna iga caawisay inaan ka soo kabsado dhammaan xogtayda, Thanks Wax badan Datanumen.com Kooxda iga caawisay xulashada aaladda saxda ah ee dhibaatadeyda.
Maqbool Axmed Rashiid Cali KHAN
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Taageero inuu ka soo kabsado emaylka la tirtiray ee Microsoft Outlook Express 5/6 fayl fayl ah.
Taageero si aad u soo ceshato faylasha dbx ee ku kaydsan warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si aad u soo kabato qaybo badan oo faylasha dbx ah.
Taageero si aad uga soo ceshato emaylka faylasha dbx sida ugu ballaaran 4GB.
Taageero si loo soo cesho lifaaqyada emaylka.
Taageero in la helo oo la xusho faylasha dbx si loogu soo celiyo kombuyuutarka maxalliga ah.
Ku dhexjiray qolofka Windows, si aad ugu soo ceshan karto emayl galka boostada oo wata macnaha guud (guji midig) menu ee Windows Explorer si fudud.
Sidee looga bogsadaa
Outlook Express wuxuu kaydiyaa dhammaan emayllada galka boostada faylka .dbx ee u dhiganta. Tusaale ahaan, feylka Inbox.dbx wuxuu ka kooban yahay emayl lagu soo bandhigo galka boostada ee Outlook Express, Faylka Outbox.dbx waxaa ku jira emayl lagu soo bandhigo galka boostada, iyo wixii la mid ah.
Haddii aad tirtirto dhowr emayl oo ku jira galka boostada si shil ah, markaa waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Express Undelete si loo baaro feylka dbx ee u dhigma galka boostada, dib u soo cesho emaylkii la tirtiray oo loo keydiyo sidii .eml faylal si fudud dib loogu soo celin karo Outlook Express.
Raadi faylka dbx ee u dhigma galka boostada hadaadan sidaa yeelin.
Fiiro gaar ah: Kahor soo kabashada emaylka la tirtiray ee faylka dbx leh DataNumen Outlook Express Undelete, fadlan xir Outlook Express iyo codsi kasta oo wax ka beddeli kara faylka dbx.
Xulo feylka dbx halkaasoo e-maylkii la tirtiray ay tahay in laga soo kabto:
Waxaad gali kartaa magaca faylka dbx si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato feylka.
Marka la eego, DataNumen Outlook Express Undelete wuxuu soo saari doonaa dhammaan e-mayllada la soo helay diiwaanka xxxx_recovered, halkaas oo xxxx uu yahay magaca faylka dbx musuqmaasuqa ah. Tusaale ahaan, feyl faylka Inbox.dbx, galka wax soo saarka asalka ah waa Inbox_recovered. Haddii aad rabto inaad isticmaasho buug kale, markaa fadlan ku xulo si waafaqsan:
Waxaad ku dari kartaa magaca galka si toos ah ama guji kan badhanka si aad u isticmaashid oo aad u xulato galka.
Click ah badhanka, DataNumen Outlook Express Undelete doonaa start ka soo kabashada waraaqaha la tirtiray ee faylka dbx ee la xushay.
Kadib nidaamka dib u soo kabashada, haddii emayllada la tirtiray laga soo kabsaday faylka dbx si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa fariinta sidan oo kale:
Hadda waxaad ku furan kartaa fariin soo kabsatay leh Outlook Express adiga oo laba jeer gujinaya the astaanta faylka .eml ee galka wax soo saarka. Ama soo dhoofso farriimo badan galka boostada Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 23, 2013
DataNumen Outlook Express Undelete 2.1 waxaa la sii daayay 17 Luulyo, 2009
Aad u hagaaji waxqabadka mashiinka soo kabashada.
In kor loo qaado iswaafajinta GUI ee qaraarada kala duwan iyo nidaamyada hawlgalka.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.0 waxaa la sii daayay Maarso 5, 2009